uBeaumont no-Taylor banqobisa i-England ngokushaya
BRISTOL, ENGLAND - JULY 05: Tammy Beaumont of England(back) celebrates her century with Sarah Taylor of England during the ICC Women's World Cup 2017 match between England and South Africa at The County Ground on July 5, 2017 in Bristol, England. (Photo by Harry Trump-IDI/IDI via Getty Images)
uTammy Beaumont no-Sarah Taylor bahlanganise i-partnership enkulu kumdlalo we-One-Day International (ODI) ngesikhathi behlanganisa ama-runs angu-275 nge-wicket yesibili bedlala nama-Momentum Proteas eCounty Ground eBristol ngoLwesithathu. Kuphinde kwaba i-partnership enkulu kwi-ICC Women's World Cup, kanye neyesibili enkulu kuma-ODI abesifazane, ukunqoba ngama-runs angu-68 behlula i-South Africa.
Ukuqala kahle kwalabadlali, okubalwa khona ama-boundaries ahlangene angu-46 no-six oyedwa, kuhlele u-373/5 we-England emuva kokuthi uHeather Knight anqobe i-toss futhi akhethe ukushaya kuqala.
Bekunzima kuma-Proteas, lapho uMoseline Daniels kunguye othole i-wicket nge-over yesi-12 ngesikhathi ekhipha uLauren Winfield ngo-24 (32 balls, 4x fours). Emuva kwalokho, kube isithombe sika-Beaumont no-Taylor, uTaylor wathola u-147 emabholeni angu-104 ngaphambi kokuthi uShabnim Ismail ahlasele nge-over yesi-47. uBeaumont waphuma nge-over elandelayo, ekhishwa uMarizanne Kapp ngama-runs angu-148.
Ophosayo uqhubekile wakhipha kabili kwi-over eyodwa, wacabangisa ababukeli umdlalo wakhe we-South Africa odlulile bedlala ne-West Indies, kodwa wathola ama-runs angu-77 kulokhu. Umphumela we-England ube omkhulu kwi-World Cup yabesifazane.
i-South Africa ilwile, yashaya ama-runs angu-305/9 kuma-overs angu-50, ama-runs amakhulu kwikhilikithi yabesifazane kushaya abesibili kwikhilikithi yama-ODI. Ngaphambi kwalokho, akekho owaphumelela ngokujaha umphumela odlulile ku-290, into enhle iqembu elingadlulela nayo phambili uma selenza amalungiselelo omdlalo olandelayo bedlala ne-India eLeicester ngomgqibelo.
uLizelle Lee no-Laura Wolvaardt (67) bayiqale kahle i-innings nge-partnership yama-runs angu-128. uLee ebebheke kwikhulu lakhe lokuqala emuva okuphunyuka kathathu, kodwa wagcina ekhishwe uNatalie Sciver (1/49) ku-72 emabholeni angu-77 (7x fours, 2x sixes). Ashaya naye uhlanganise ama-runs angu-67 emabholeni angu-103, okubalwa khona o-four abayisishagalolunye ngaphambi kokuthi akhishwe u-Anya Shrubsole (1/58) kwi-over yesi-33.
Abanye abashayayo abaphakamise izandla uChloe Tryon no-Mignon du Plessis (43). uTryon uhlanganise u-50 wakhe osheshayo, emabholeni angu-26 wathola u-54 okubalwa khona o-four abahlanu no-six abane, njengoba i-partnership ye-wicket yesihlanu yama-runs angu-75 no-du Plessis ithe ukuthusa kancane.
Bebecelwe okukhulu ekugcineni, nokho uSune Luus (22 off 14) ethe ukuhlasela kancane. i-England ithole ukunqoba kwesithathu emidlalweni emine, kwathi i-South Africa yahlulwa okokuqala emidlalweni emine, okubalwa khona umdlalo wemvula ne-New Zealand. Sebe unombolo-4 kumqhudelwano.
i-ICC ivumile ukuthi i-Event Technical Committee ye-ICC Women's World Cup 2017 imvumele u-Odine Kirsten ozongenela u-Andrie Steyn olimale iqakala ngesikhathi bezilolonga.
Ukubuyiselwa komunye umdlali kudinga kuvunywe i-Event Technical Committee yomqhudelwano ngaphambi kokuthi umdlali angafakwa eqenjini. Abakwikomidi uGeoff Allardice (ICC, chairman), uCampbell Jamieson (ICC representative), uSteve Elworthy (Tournament Director), uAlan Fordham (host representative), u-Anjum Chopra no-Alison Mitchell (independent nominees).
Wonke umuntu usendaweni enhle ngaphambi kwe-England – uChetty Isihluku sika-Van Niekerk no-Kapp bahlanganisa ukunqoba kumaProteas esifazane AmaProteas esifazana agxile kumdlalo wabo uMoreeng unelisekile ngendlela ethathwa iqembu lakhe Umdlalo wamaProteas esifazane kanye ne-New Zealand uyekiwe ngenxa yemvula Siyazi ukuthi kuzomele silethe umdlalo ohamba phambili” – uVan Niekerk AmaProteas esifazane “alungile futhi alindele ukudlala” – Van Niekerk uVillani noPerry bahlanganisa ukunqoba okwanele kuma-Southern Stars